हलो अड्काएर गोरु कुट्ने काइदा – रामशरण प्याकुरेल – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
७ आश्विन २०७७, बुधबार ०४:१४ English
हलो अड्काएर गोरु कुट्ने काइदा – रामशरण प्याकुरेल
देशको संबैधानिक र राजनैतिक संकट अरु जटील बनिरहेको छ। शायद दलहरुले दल र सत्ता स्वार्थभन्दा पृथक रहेर गंभीरतापूर्वक जिम्मेवारी वहन गरेका भए यो अवस्था आउने थिएन । केही दिन अघि राष्ट्रपतिले शितल निवासमा ५ घण्टा लगाएर २७ दलहरुसंग गरेको छलफलले पनि खासै निकास निकालेन । दलहरुको उही वासी कुरा र अर्थहीन अडान त्यहां पनि देखियो । आफू निकास दिन नसक्ने, तर राष्ट्रपतिकहां गएर सहमतिको लागि प्रयत्न भइरहेको छ भनेर हरिया दांत देखाइरहने दलहरुको निरीह प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कार विपरित छ । दलहरुको निष्ठा र प्रतिबद्धतामा देखिएको खोट नसुधार्ने हो भने राष्ट्रपतिले भनेझैं देश इराक वा अफगानिस्तान बन्न समय लाग्ने छैन ।
नेपालको वर्तमान समस्या जनताको आवश्यकता पहिचान गर्न र पार्टीभन्दा माथि उठेर ठूला भनिएका दलहरुले निर्णय गर्न नसक्नु हो। एउटामात्र पार्टीको धारणाले सिंगो देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने पाठ विगत चार वर्षमा देशमा देखिएको अराजकताबाट ग्रहण गर्न कसैले पनि सकेनन्। राजनीतिक दर्शनहरू सही मानेर हेर्ने हो भने पनि नेताका त कमी कमजोरी हुन्छन्। तर तिनलाई दोहोर्‍याउनु हुंदैन थियो ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको लहड र सत्तामा टिकिरहने महत्वाकांक्षाकै कारण मुलुक अन्योल र अनिश्चयको भुमरीमा फंसिरहेको छ । उनकै असंवैधानिक कदमले निम्तिएको संकटकै कारण मुलुक दुर्घटनाउन्मुख हुँदैछ । सत्तालिप्साका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई बाइपास गरेर एक्लै हिंड्न खोज्ने उनको प्रवृत्ति नै अहिलेको सहमतिको बाधक बनेको छ । सहमति भए अहिल्यै छोड्छु पनि भन्ने तर सहमतिको लागि सामान्य नैतिक प्रयत्न समेत नगर्ने उनको हलो अड्काएर गोरु चुट्ने प्रवृत्तिकै कारण मुलुकले राजनीतिक र संवैधानिक संकट भोग्नु परीरहेको छ ।
जति दिन जिम्मेवारीमा रह्यो, त्यति नै मात्रामा आफूलाई नांगो बनाउंदै गएका भट्टराई राष्ट्रिय सहमतिको बाधक बनेर सत्तामा नरहनु नै उनी र देशको हितमा हुने देखिएको छ । उनको व्यक्तिगत गल्तीको सजाय सिंगो देश र समाज धेरै दिनसम्म भइरहन सक्दैन । त्यसका लागि जनस्तरबाट खबरदारीको जरुरी भइसक्यो । बाबुराम भट्टराईले तत्काल राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार गर्न भूमिका खेल्नु नै उनका लागि हितकर हुने देखिन्छ । विगतमा बाबुराम भट्टराइलाई माओवादी पार्टीइतरको पक्षले लोकतन्त्रवादी र उदार विचारका धनी भनेर प्रस्तुत गर्‍यो। झन्डै डेढ दशक लगाएर बनाएको त्यो छवि उनको आफ्नै कारणले ध्वस्त भएको छ। बाबुरामलाई यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा पनि निरंकुश र महत्त्वाकांक्षी शासक भनी टिप्पणी गर्नेको कमी छैन।
तर राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्य दलका प्रमुख नेताहरु पनि सहमति, सहकार्य र एकताको रट लगाइ रहने र देशलाई निकास दिनभन्दा पनि कसरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हत्याउँ र आआफ्नो दुनो सोझ्याउन भन्ने ध्येयका कारण बाबुरामभन्दा फरक गर्लान् वा गर्न सक्छन् विश्वास जनतामा छैन । तर पनि सहमतिबिना समस्या पार लाग्दैन । हिजो जो भए पनि केही गर्न नसकेको कुरालाई स्वीकारेर अविलम्ब सहमति गर्न नेताहरु चुके भने जनताले कसैलाई माफ गर्ने छैनन् ।
कामचलाउ हैसियतको जनाउ दिँदै सहमतिका लागि पहल गर्न भन्दै राष्ट्रपतिले यसअघि जनाउ दिएका कारण राजनीतिक समस्याको बल प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा पुगेको थियो। तर, बिनाउपलब्धि लामो समय बित्यो, दूरगामी महत्त्वका काममा सरकारले हात हाल्न थाल्यो वा मुलुक नै अनिर्णयको बन्दी बन्ने अवस्था आयो भने सरकारको कोर्टमा फालिएको बल राष्ट्रपतिले दलहरूतिर हुत्याइदिन सक्नेछन्। त्यस चरणमा दलहरूभित्र सत्ताका लागि गुट-उपगुटकै खेल चले र साझा समाधान दिन सकेनन् भने बल पुनः राष्ट्रपतिकै कोर्टमा फर्किने देखिन्छ। राष्ट्रपतिसंग पो के त्यस्तो विकल्प छ ? उदेक लाग्दो यो अवस्था हामीले कहिलेसम्म चलिरहन दिने ?
अरू दलका नेतासँग परामर्श नगरी संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा गर्नु प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अर्घेल्याइँ थिये । मूलतः उनको त्यही व्यवहारले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बिगारेको हो। संविधान सभा चुनाव घोषणा गर्नुपूर्व उनले निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरेका रहेनछन्। यसैले त आयोगले सार्वजनिकरूपमै तोकिएको मिति मंसिर ७, २०६३ मा निर्वाचन गर्न नसकिने जनाउ दिएको थियो । यस अस्तव्यस्तताको नैतिक जिम्मेपारी प्रधानमन्त्री भट्टराईले लिनुपर्थ्यो। तर, भट्टराई उल्टै अरू दलका नेतालाई दोष दिएर पहिलेका सहमतिसमेत भंग भएको घोषणा गर्न सक्रिय भएका छन्। भट्टराईको आक्रमक व्यवहार जति नै प्रतिरक्षात्मक भए पनि त्यो तर्क र विवेकसम्मत देखिँदैन। आफ्नै सर्त सबैले स्वीकार गर्नैपर्ने जिद्दी उनले जो गरेका छन्। हुनत, कानुनी हैसियत नभएका त्यस्ता सहमति पालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने एउटा नैतिक प्रश्न हो। परन्तु, सहमतिको राजनीति अपरिहार्य भएका बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईको वर्तमान व्यवहार प्रत्युत्पादक भइरहेको छ।
नेपालमा बाबुरामको विकल्प राष्ट्रपतिले दिने विकल्प पनि ठिक हुन सक्दैन । र, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणकारी शासनतर्फको यात्राले नेपाली जनताको अन्धकार बनाइरहेको भविष्यलाइ पनि अरु बढी बढावा दिइरहन सकिन्न । कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलको जनपरिचालन कमजोर हुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई निरंकुश बन्न हौस्याएको हुनुपर्छ। तर, लोकतन्त्रको संकटमा दल र तिनका नेताको दोष देखाएर बस्नु उचित होइन। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन् भन्ने विश्वास सबैमा टुटिसकेको छ। सरकार परिवर्तनको विषयलाई भावी संविधानका अन्तरवस्तुसँग साट्ने अहिलेको भट्टराइ र उनको दल माओवादीको यो मनोवृतिलाई जित्ने गरी फेरी पनि निकास निकाल्ने काम भने दलहरुकै हो ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले जतिसुकै हठ र तर्क गरे पनि मुलुकको यो सङ्कटपूर्ण संगीन घडीमा फेरी पनि तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाको कथा दोहोराइरहनु हुंदैन । राष्ट्रिय सहमतिको नयां समिकरण र संस्करणका बारेमा सबै दलहरुले गंभीरतापूर्वक सोच्न ज्यादै ढीला भइसकेको छ । इमान्दारिताकासाथ समस्या समाधानका लागि सबै दलका नेताहरु एक ठाउंमा बसेर स्थिति सहज पार्न लागेमा अहिलेका समस्या तत्काल समाधान हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीले हाम्रो राजनैतिक र सम्बैधनिक समस्या समाधान गर्ने सांचो अर्कैको हातमा छ भनेर राष्ट्रिय स्वाभिमानमा समेत चोट पुर्यार्उने गरी दिएको अभिव्यक्तिको प्रत्युत्तर पनि मिल्नेछ । नत्रभने भोलीको समयले कुन बाटो पक्रने हो भन्न गाहारो देखिंदैछ ।
१० साउन २०६९
२५ श्रावण २०६९, बिहीबार ०४:१२ मा प्रकाशित